Xiisadda Udhaxaysa Dalalka Turkiga Iyo Mareykanka Oo Wali Cakiran + [ Arimaha La Isku Maan Dhaafay]
Friday, 13 October 2017 14:44
13/10/2017 (BNN) Xiisadda Udhaxaysa Dalalka Turkiga Iyo Mareykanka Oo Wali Cakiran + [ Arimaha La Isku Maan Dhaafay]
Mareykanka ayaa weydiistay Dowlada Turkiga inay soo bandhigo haddii ay heyso caddeymo
muujinaya eedaha ay usoo jeediyeen shaqaalo ka tirsan qunsuliyada Mareykanka ee Turkey iyo dhowr muwaadin oo Mareykan ah oo lagu xiray dalka Turkiga.
Muwaadiniinta Mareykanka ee lagu xiray Turkiga ayaa waxaa ku jira wadaad ka tirsan Kaniisadda oo lagu magacaabo Andrew Brunson.
Afhayeen u hadashay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo lagu magacaabo Heather Nauert, ayaa ugu baaqday Dowladda Turkiga in ay Mareykanka usoo gudbiso cadeymaha muujinaya in dadkani yihiin argagixiso.
Waxay ka dalabtay xukuumadda Ankara in ay ka dhabeyso balanqaadkeedii ahaa in dadka la xiray ay u golaan doonto in ay arkaan qareenada matalaya.
Arbacadi, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Turkiga, Mevlut Cavusoglu. Wuxuu u gudbiyay walaaca qotada dheer ee ay ka qabaan xiritaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo shaqaalaha qunsuliyada.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa u sheegay Mareykanka in haddii ay rabaan sii deynta wadaadka lagu magacaabo Adrew Brunson ay usoo gacan geliyaan wadaadka ay sida aadka u doon dooneyso Dowlada Turkiga, Fethullah Gulen oo masaafuris iskiis ah u jooga dalkaan Mareykanka.
More in this category: « Daawo Xisbiga KULMIYE Oo Dhigiisa WADDANI Ku Eedeeyey Inuu Dhalinyaro Uu Soo Abaabulay Ay Waxyeeleeyeen Xafiis Xisbiga Kulmiye Ku Leeyahay Burco Iyo WADDANI Oo Si Adag Uga Jawaaby Eedayntan Dowladda Fadaraalka Somaliya Oo Shir Deg Deg Ah Isugu yeedhay Madaxda maamul Goboleedyada Ka Jira Dalka »